Rafitra telefaona maika an'ny tonelina ho an'ny serivisy vonjy maika-News-Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co., LTD
FIAINANA: 2020-11-17 HITS: 16
Noho ny habaka voafetra an'ny tionelina lalambe, raha vao misy ny lozam-pifamoivoizana, toy ny afo, horohoron-tany, fianjerana, na lozam-pifamoivoizana izay miteraka fahavoazana, dia maro ny fahasahiranana amin'ny asa famonjena. Amin'ny alàlan'ny fananganana haingana ny a rafitra vonjy taitra sehatra mifototra amin'ny "tsipika maranitra", ny fametrahana marina, ny fifandraisana, ny fampielezam-peo, ny fanaraha-maso ny tontolo iainana ary ny fandefasana horonantsary an'ireo mpamonjy voina dia azo tanterahina.
Ningbo Joiwo Ny rafi-telefaona maika an'ny tonelina dia manome fanohanana data momba ny baiko fanavotana eo an-toerana, izay fandrindrana ny famonjena ao amin'ireo sampana maro dia afaka manatsara ny fahombiazan'ny asa sy miantoka ny fampandrosoana milamina ny asa famonjena eny an-toerana.
Tamin'ny fisokafan'ny làlam-pirenena sy ny tambajotram-pifamoivoizana manerana ny tanàn-dehibem-paritany dia nanomboka niroso tamin'ny fananganana faritany sy faritany lavitra ny fanamboarana arabe. Ny tetezana sy ny tonelina dia mitaky fitomboan'ny isan'ny làlambe. Raha miverina mijery ny lozam-pifamoivoizana nisy namono nanerana izao tontolo izao dia niteraka fahavoazana lehibe sy fatiantoka trano. Azo lazaina fa ny famonjena ny lozam-pifamoivoizana dia nanjary olana lehibe atrehin'ireo firenena rehetra manerantany.
The tionelina lalambe dia "ety sy lava fantsom-p tubular", ary ny mampiavaka azy amin'ny maritrano dia mamaritra fa ny lozam-pifamoivoizana tampoka tampoka ao anaty tionelina dia manana ireto toetra manaraka ireto:
1. Sarotra ny manavotra sy mamindra toerana;
2. Sarotra ny mitarika sy mitantana haingana;
3. Miely haingana ny setroka, misy poizina ary tsy mora esorina;
4. Raha vao misy afo ao anaty tionelina lava, dia ho sarotra kokoa ny hanavotra ireo trano sy trano fanatobiana entana izay sarotra kokoa noho ny mahazatra, ary ny ekipa mpamonjy voina dia ho sarotra apetraka;
5. Voafetra ny habaka fanavotana, ary tsy misy famantarana ao amin'ny tionelina, izay misy fiantraikany amin'ny fifanakalozana vaovao, izay misy fiantraikany amin'ny fahombiazan'ny famonjena. 1 Ny filàna sehatra fampahalalana vonjy maika ao anaty tionelina lava;
6. Miparitaka haingana ny fandoroana, maharitra ela, ary sarotra fehezina. Raha simba mora mirehitra, mora mirehitra, mipoaka, poizina mahery vaika ary mampidi-doza ny entana entina, matetika dia vao mainka hiharatsy ilay loza;
7. Ny fiparitahan'ny afo haingana dia mety tsy hahomby ao anatin'ny fotoana fohy ny rafitry ny jiro, ny rafitra fanaraha-maso ary ny rafitra fanairana mandeha ho azy ao anaty tionelina. Ankoatr'izay, ny afo, ny setroka matevina ary ny hafanana avo lenta ateraky ny fiasan'ny akora simika mampidi-doza sy ny tany, dia matetika no mahatonga ny famonjena.
Ny tsy fahombiazan'ny jiro dia azo soloina generator. Raha vantany vao tapaka ny fifandraisana ary tsy eken'ny ekipa mpamonjy voina ao amin'ny tionelina intsony ilay baiko dia mety hanana impac lehibe kokoa izy ioT. Noho izany raha sendra voina ao anaty tionelina dia ny telefaona tionelina vonjimaika explosion dia tena zava-dehibe, izany manampy amin'ny fananganana haingana ny sehatra feno ho an'ny rafitra vonjy taitra amin'ny tionelina.
Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co., LTD dia mpamokatra iray manana traikefa momba ny vokatra telecommunication matihanina sy ny traikefa famokarana 15 taona. Nahazo patanty modely ho an'ny besinimaro, patanty fisehoana ary fisoratana anarana amin'ny lozisialy ny orinasa. Ningbo Joiwo dia miasa amin'ny telefaona matevina sy tsy misy hamandoana, telefaona tsy misy fipoahana, telefaona IP, rafitra fifandraisana IP indostrialy, telefaona fibre optika lalantsara ambanin'ny tany, telefaona fampielezana feo sy hazavana nohavaozina, ary telefaona vonjy maika.